7 Xeelado Lagu Kordhiyo Abuurista Mawduucaaga | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 29, 2015 Thursday, April 30, 2015 Jenn Lisak Golding
Maalintii Talaadada, waxaan ku helnay webinar cajiib ah mid ka mid ah shuraakadayada, Wordsmith ee Suuqgeynta, on 10 Xeeladaha Abuurista Mawduuca ee Markuu Ceelku Qallalo. In kasta oo aan ku raaxeysanay sameynta kaftan iyo ciyaar yar oo daaha gadaashiisa ah, waxaa jiray fikrado waaweyn oo lagu wadaagay websaydhka.
Waa kuwan 7 waxyaabaha muhiimka ah ee laga helayo xeeladaha abuurista waxyaabaha webinar:
1. Waqti u qoondee hawsha hal-abuurka - In kasta oo ay u muuqan karto wax fudud, dad badan ayaan dhab ahaan waqtiga u dhigin jiilka mowduuca; waxay u qoondeeyeen waqti fulinta. Jadwal u samee wakhti si aad uga fikirto ama u abuurto fikrado cusub, ugana takhalusto waxyaabaha ku mashquulinaya. Xaaladda la xidhiidha:
Celcelis ahaan, shaqaaluhu waxay ku qaataan in ka badan 50% maalmaha shaqadooda helitaanka iyo maaraynta macluumaadka halkii ay ugu isticmaali lahaayeen inay ku qabtaan shaqooyinkooda. (Xigasho: LexisNexis)
2. Meel ku dhow ha dhigto buugaagta yaryar - In kasta oo ay wanaagsan tahay in waqti loo sameeyo hawsha hal-abuurka, dadka qaarkood (aniga oo kale!), Casiirka hal-abuurka ahi waligood socodka ma joojinayaan. Waxaan la imaan karay fikrad aad ufiican inta aan daawada Fadeexada ka daawanayo Netflix, ama inta aan kujiro qolka jimicsiga. Haysashada buugaagta dhow ayaa kugu dhiirrigalin doonta inaad qorto fikradahaaga oo aad keydiso hadhow.
3. Yeelo mawduucyo saddex biloodle ah iyo bille ah - Markii aan bilownay inaan ku dhiirrigelino macaamiisheenna inay tan sameeyaan, waxaan dhab ahaan aragnay qiimeynta mashiinka wax lagu raadiyo oo kor u kacaya macaamiisha ku dhegan tan sannadka soo socda kuwa aan ku dhicin. Tani waa hab fiican oo wax looga qaban karo ololeyaasha kanaallo badan; haddii aad leedahay mowduucyo dhowr ah oo aad diiradda saari karto, markaa waxaad dib ugu soo celin kartaa waxyaabaha ku jira warbaahinno kala duwan, sida infographic, cad cad, fiidiyowyo, iwm, si marka dambe ay kuugu fududeyso shaqada. Xaaladda la xidhiidha:
"84% dadka suuqleyda ah ee sheegaya in aysan wax ku ool u aheyn suuqgeynta waxyaabaha ay sheegeen in aysan heysan wax istiraatiijiyad dukumiinti ah." (Xigasho: Machadka Suuq-geynta Macluumaadka)
4. Sanduuqaaga sanduuqa ayaa ka mid ah hantidaada ugu fiican - Haddii aad u baahan tahay fikrado cusub oo ku saabsan waxa ku jira, ka fiiri emaylka emaylkaaga. Ma leedahay macmiil ku weydiiyay su'aal dadka kale ay u badan tahay inay weydiinayaan? Kusoo celi jawaabtaada si aad ugu adeegsato suuq geynta waxyaabaha ku jira. Miyaad wada hadal xiiso leh la yeelatay qof kula shaqeeya oo ku saabsan waxa aad qabanayso? Ka hadal waxa ku saabsan bartaada internetka. Eeg isgaarsiintaada adoo adeegsanaya emayl oo fiiri sida aad ugu adeegsan karto suuqgeynta waxyaabaha ku jira shirkaddaada.
5. Markaad shaki gasho, liis garee - Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah cilmi-baarista weyn ee Wordsmith ee Suuqgeynta ay sameysay, waxay liis garaynaysaa qoraallada in ka badan 10% dhammaan cinwaannada ku jira Inbound.org “All Time” Top 1,021 gudbinta. (Eeg waxa aan ku sameeyay qoraalkan?) Dadku waxay jecel yihiin lambarrada, waxayna dadka u siisaa ballanqaad si ay xoogaa u ogaadaan waxa ay helayaan markay wax gubaan.
6. Ma haysatid wakhti aad wax ku qorto? Kireyso ghostinterviewer / qoraa - Aan kuu sharaxee. Waxaan la soo shaqeeyay tan iyo agaasimayaal guud iyo CMOs kuwaas oo aragti fiican ku leh warshadohooda, laakiin ma haystaan ​​waqti ay wax ku qoraan. Si tan loola dagaallamo, waxaan u dirnay qorayaal cirfiid ah oo runtii saacad kasta qaata saacad kasta si ay uga wareystaan ​​agaasimayaasha guud mowduucyada, ka dibna waxay ku qoraan baloogyo ama maqaallo aragtida fulinta. Waa hab fiican oo looga heli karo hoggaanka fikirka halka adoo waqti iyo lacag badbaadinaaya.
7. Dhab ahaan, jooji cabsida dibedda - Muddo dheer, nuxur-ka-bixintu waxay ahayd dood ay ku murmeen dad badan oo aan la hadalnay, laakiin waxaan ahayn taageere u xilsaaran dib-u-dejinta illaa maalintii 1aad. Xitaa haddii aan cilmi-baaris ama mawduuc ka bixinno, waxaan taabannaa qayb kasta oo ka mid ah maaddooyinka ka hor inta aysan u bixin macaamiisha ama adduunka u bixin. Weli waan dhisayaa istiraatiijiyadda, wali waxaan sameynayaa baaritaanka erayga muhiimka ah, wali waxaan usameynayaa codka wali waxaan gacanta kuhayaa sida ugufiican ee nuxurka nuxurka uu noqonayo. Xaaladda la xidhiidha:
62% ka mid ah shirkadaha ayaa bixiya suuqgeyntooda - halka markii hore ay ahayd 7% sanadkii 2011. ” (Xigasho: Mashable)
Si aad u aqriso dhammaan taatikada, ka daawo webinar buuxa halkan:
Haddii aad hayso talooyin kale oo aad ku darto, fadlan ku samee faallooyinka!
Tags: abuur abuurkaContent Suuqabuurista waxyaabofikradahafikradaha qoraalkawaxa la qoroQoraalka
Istaraatiijiyaddaada Suuq-geynta Macluumaadkaaga 2015 miyuu daboolayaa Isbeddelladan?
Talo weyn oo ay tahay in qof kastaa ku beero diyaarinta websaydhkaaga.